UBlade ukhalele imisebenzi yabangu-2500 elahleke ezitolo zaseMgungundlovu – Sivubela intuthuko Newspaper
UBlade ukhalele imisebenzi yabangu-2500 elahleke ezitolo zaseMgungundlovu
UDKT Blade Nzimande nethimba lakhe behlola umonakalo e-Greater Edendale Mall eMgungundlovu
UNGQONGQOSHE woMnyango weMfundo ePhakeme nezokuQeqesha uDkt Blade Nzimande ukhale ngemisebenzi engu-2500 elahleke eMgungundlovu kubantu abebesebenza ezinxanxatheleni zezitolo ezintathu ezingqongqisiwe kade kutatshwa izitolo emavikini edlule.
UDkt Nzimade ubevakashele i-Greater Edendale eyohlola umonakalo wezitolo ezikulendawo ezingqongqiswe ngomlilo kade kutapwa ukudla emuva kokuboshwa kwalowo owayengumengameli waseNingizimu Afrika uMnu Jacob Zuma. Idolobha laseMgungundlovu lingelinye kwakhahlamezekile kakhulu ngalezi zibhelu zakamuva njengoba kungqongqiswe i-Graeter Edendale Mall, iKwaMabulala Shopping Centre, iBrookside Mall, iChina Mall nezinye izitolo ezisedolobheni nama-warehouse.
Ekhombisa ukudumala ngokwenzekile emphakathini wangakubo KwaDambuza nangokubamba iqhaza ewutshela ukuthi lokhu kokucekelwa kwezitolo eziphambi kwawo kuyamdumaza ngoba kakusukanga abantu bakwenziye izindawo kodwa kube ngabantu bendawo ababambe iqhaza bazitapela ezitolo ebeziwusizo emphakathini. “Bengikhuluma nenye yezimenenja zalezi zitolo ezingqongqisiwe njengoba ingitshele ukuthi nayo ikhathazekile ngabantu abakhulile abebehola imali yesibonelelo sikahulumeni esitolo sayo. Ngizwile ukuthi izalukazi namakhehla bezithi uma zisalinde ukuholelwa ziphunge itiye ngesihle ebezilenzelwa yizimenenja zalezi zitolo zibonga uxhaso kubantu abaseduzane. Bantu baKwaDambuza phumani ezimpini ezinganidingi musani ukuvumela ukusetshenziswa ngabantu abathize ukulwa nohulumeni. Lokhu okwenzekile kakufani nani yingakho nginikhuza nje ngoba ngiyanazi,” kukhuza uDkt Nzimande.
Ukhuze umphakathi wangakubo KwaDambuza eMgungundlovu ukuba uphume uphele ezimpini zezepolitiki ngoba lokho kugcina kungcolisa igama lendawo yangakubo ize ingene ehlazweni imbala. “Lapha kasikhulumi ngeminye imisebenzi yabantu abadayisa eceleni kwalezi zitolo ezicekeliwe sisakhuluma ngabantu abebeqashwe ngokugcwele okunamhlanje sebebalwa nabangasebenzi. Lezi zitolo ezakhele i-Edendale bezibambe iqhaza elikhulu ngoba zivule imisebenzi eminye lapho abantu abebephuma emakhaya bazondlala amatafula abo bedayisa imikhiqizo yabo. Sekungumlando namhlanje njengoba sebequve emakhaya. Siyathemba ukuthi uhulumeni wethu uzokwenza izinhlelo ukubuyisela isimo esimweni saso nempilo yabantu iqhubeke,” kusho yena.
UMeya nomhlangano nabamabhizinisi ngemuva kwezibhelu